မေး။ ။ စိန်ပလောင်: ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရား နတ်ပြည်မှာ နတ်သားတစ်ယောက်နဲ့ နတ်သမီး တဖက်ငါးရာ ၊ နှစ်ဖက် ဆို တစ်ထောင်။ ဤသို့ ကျမ်းဂန်းမှာ လာရှိပါသလား။ ရှိပါက မိန်းမတွေသေ နတ်ပြည်ရောက်။ ယောင်္ကျားတွေသေ နတ်ပြည်အရောက်နဲလို့ ဤသို့မှတ်ယူထိုက်ပါသလော။ ယောက်ျားတွေနတ်ပြည် အရောက်နဲတော့ ဘယ်ပြည်တွေ အရောက်များနေပါသလဲ။ အများတကာ သိစေလို၍ ရွာဦးကျောင်းစီဘောက်မှ လျှောက်ထားလိုက်ပါသည်။
ဖြေ။ ။ နတ်သားတိုင်း နတ်သမီး တစ်ဖက် ငါးရာပုံသေရှိသည်ဟူ၍ မတွေ့ဖူုးပေ၊ ကျမ်းဂန်များ၌ ဖော်ပြပါရှိသော နတ်သမီးတစ်ဖက်ငါးရာ ခြံရံသော နတ်သားများကို ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ အဖြစ်သာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ လု့ပြည်၌ ကုသိုလ်ထူးသော ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလို နတ်ပြည်၌လည်း အများတကာထက် ပါရမီကုသိုလ် ထူးသူများ ရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့သည် ကုသိုလ်ပါရမီ ထူးသည်အားလျှော်စွာ နတ်သမီး တစ်ဖက်ငါးရာ ခြံရံ၍ နတ်ပြည် စည်းစိမ်ကို အပြည့်ခံစားရ လေသည်။ သို့သော် နတ်သားတိုင်း ထိုကဲ့သို့ခံစားစံစားရသည်ဟု မှတ်ယူ မထားသင့်ပေ။ နတ်သမီးတစ်ယောက်အား နတ်သားများစွာ ဝိုင်းဝန်းလုယူသော အဖြစ်အပျက်များ ရှိသည်ကို သတိထားသင့်ပါသည်။ မည်သူသေသည်ဖြစ်စေ မိမိပြုသောကံသည်သာ ပဓာနကျသောကြောင့် မိန်းမ ယောက်ျားခွဲခြား၍ သုဂတိ ဒုဂ္ဂတိ ရောက်သည်ဟူ၍လည်းမဆိုနိုင်ပေ။ နိဗ္ဗာန်ကို မရောက်မချင်း ငါသူတစ်ပါး ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ ယောက်ျားမိန်းမ မရွေးပဲ ဒေဝ၊ မနုဿ၊ နိရယ၊ ပေတ၊ တိရိစ္ဆာန၊ ဟူသော ဂတိများသို့ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ရောက်ကြရမည်သာ။ ။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 9:54 AM0comments Links to this post
မေး။ ။ ကပ္ပိယသာချို: အရှင်ဘုရား အဘိဓမ္မာဘုရားဟော ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ပါတယ် ဘုရား တကယ်လို့သာဘုရားဟောဆိုရင် ဘယ်လို့အချက်တွေကြောင်းသိနိုင်ပါသလဲ ဘုရား ၊
မေး။ ။ နောက်တစ်ခါ သမ္မာဒိဌိ ဟာ သိပ္ပံပညာရဲ့ ခြေလှမ်းကို လိုက်နိုင်ပါရဲ့လားဘုရား
ဖြေ။ ။ ဤမျှနက်နဲ ခက်ခဲသော ရုပ်နာမ်တရားများကို အ သေးစိပ် ဟောကြားထားသော အဘိဓမ္မာတရားကို ဘုရားမဟောလျှင် အဘယ်သူဟောသည်ဟု ငါ့ရှင်သာချို ယူဆမိပါသနည်း? ။ မြတ်စွာဘုရားသည် အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အကျယ်တဝင့် ဟောကြားတော်မူပြီး။ အရှင်သာရိပုတ္တရာအား အကျဉ်းအားဖြင့် ဟောကြားတော်မူလေးသည်။ အရှင်သာရိပုတ္တရာ သည်လည်း လင်းနို့သားဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ရဟန်းငါးရာတို့အား မကျဉ်းမကျယ် လက်ဆင့် ကမ်း၍ ဟော ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ဤသို့လျှင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မှ အစပြုကာ ဆရာအစဉ် အဆက် အားဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင် လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ ကပ္ပိယသာချိုတို့ လက်ထက်တိုင် အောင်ဖြစ်လေ သည်။ ။ရုပ်နာမ်တရား တို့ကို ပိုင်းခြား၍ ဟောထားခြင်း၊ ပရမတ္ထသဘာဝ တရားများကို ဖြစ်စဉ်အတိုင်း အကြွင်း မရှိ ပြည့်စုံစွာ ဆက်စပ် ဟောထားခြင်းတို့ကို ထောက်ဆ၍ သဗ္ဗညုတ ဘုရားရှင်မှတစ်ပါး အခြား တစ်စုံတစ်ဦး သောသူသည် ဟောကြားနိုင်စွမ်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကျယ်ကိုသိလိုလျှင် အောက်ပါလင့်တွင် http://www. dhammaflavour.net/2009/06/blog-post_3899.htmlလေ့လာနိုင်ပါသည်
ဖြေ။ ။ သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်=ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ နာမရူပပရိဂ္ဂဟသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ဟေတုပစ္စယပရိဂ္ဂဟသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ဝိပဿနာဥာဏဒဿနသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ လောကုတ္တရမဂ္ဂဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိ-အားဖြင့် ငါးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ လောကုတ္တရမဂ္ဂဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိ သည်ပင်လျှင် သိပ္ပံပညာ၏ ခြေလှမ်းကို ကျော်လွန်သွားပြီး ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၄င်းသမ္မာဒိဋ္ဌိ တရားတို့ကိုကောင်းစွာ သဘောမပေါက်ပဲ၊ မည့်သည့် သိပ္ပံပညာကိုမျှ ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိသိပ္ပံပညာရှင်များ လေ့လာနေသော သိပ္ပံသည်ကား နာမရူပပရိဂ္ဂဟသမ္မာဒိဋ္ဌိ- မှ-(ရူပ) ဟုဆိုအပ်သော ရုပ်တစ်စိပ် တစ်ဒေသကို သာလျှင် လက်တွေ့ အားဖြင့် လေ့လာနေကြခြင်းသာ ဖြစ်သေး၍၊ ကပ္ပိယသာချို ဆိုလိုသော သမ္မာဒိဋ္ဌိ ကိုသာလျှင် ကောင်းစွာသိရှိ ထားမည်ဆိုပါက၊သိပ္ပံပညာ၏ခြေလှမ်းကို လိုက်နိုင်ရုံမကပဲ၊ ဘုရားရဟန္တာ အရိယာ သူတော်ကောင်းတို့သာလျှင် အာရုံပြုကျက်စားရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 5:07 PM0comments Links to this post
ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးတွေကို သည်းခံခြင်းနှင့်၊ မိမိ၏ အလိုဆန္ဒကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လိုချင်တပ်မက်မှူတွေကို သည်းခံခြင်းဟူ၍ သည်းခံခြင်း နစ်မျိုး ရှိရာ တွင်၊ မည့်သည့်အရာက ပို၍ သည်း ခံရ ခက် သနည်းဟု ရှေးဦးစွာစဉ်းစားဖို့လိုလေသည်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အလုပ် ထုပ်ခံ ရမည်စိုး၍ မာန်နေဂျာက ဆူပူ ငေါက် ငန်း သည်ကို သည်းခံရခြင်း၊ မယားက ပူညံ ပူညံလုပ်မည်စိုး၍ မိမိသောက်ချင်သော ဘီယာကို မသောက်ပဲ သည်းခံရခြင်း၊ အိမ်ကနှင်ချမည် ကို စိုးရိမ်၍ အိမ်ရှင်၏ ဆူးပူမှူကို သည်းခံခြင်း၊ စသော- ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်သော သည်းခံခြင်းများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သီးခံလာရပေါင်းများမှာ မနည်းလှတော့ပေ။း
သို့သော်= လုပ်ခွင့်လည်းရှိ လုပ်လို့ရမည့်အနေအထားလည်းရှိသည်ဆိုလျှင် မလုပ်ပဲ အဘယ်နစ်ကြိမ်မျှ လောက် သည်းခံဖူးပါသနည်း။ အလုပ်ခွင်တစ်ခု၌ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ မရိပ်မိနိုင်သော ငွေရပေါက် တစ်ခုကို တွေ့လျှင် အသင်သည် ရရှိသောအခွင့်အရေးကို မယူပဲ ဘယ်နစ်ကြိမ်လောက် သည်းခံပြီးနေခဲ့ဖူးပါ သနည်း။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရပါလျှင် လူတိုင်းလူတိုင်းသည် များသောအားဖြင့် မိမိဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက်နိုင် ဟု ယူဆရလျှင်၊ သို့တည်းမဟုတ် မည်သူမျှ မရိပ်မိဘူးဟု ယူဆနိုင်လျှင် မည့်သည့်အရာကိုမျှ ယေဘုယျ အား ဖြင့် သီးခံနိုင်စွမ်း မရှိကြပေ။
အင်အားမမျှ၍ သည်းခံလိုက်ရခြင်း၊ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ တရားရင်ဆိုင်ရမည်ကို သိ၍ သည်းခံလိုက်ရခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း၌ မျက်နှာမလှဖြစ်မည်ကိုသိ၍ သည်းခံလိုက်ရခြင်း၊ စသည်စသည် အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သည်းခံရခြင်းများကိုသာလျှင် မလွဲသာမရှောင်သာ သည်းခံခဲ့ဖူးကြလေ၏။ မိမိ၏ စိတ်၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော လိုချင်တပ်မက်မှူများကို လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိပါလျှက်နဲ့ မလုပ်ပဲ အဘယ်မျှသည်းခံခဲ့ဖူးပါသနည်း။
ဥပမာ= ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ကြောက်စရာမလို့၊ ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှလည်းထောက်ထားစရာမလိုပဲ မိမိ၏ စိတ် ဆန္ဒအတိုင်း၊ လုပ်၍ရသော အခြေအနေ အနေအထားမျိုးကို သင်ရရှိနေပါလျှင်၊ အဘယ်မျှသည်းခံနိုင်စွမ်း ရှိပါမည်နည်း။ ရွာဦးကျောင်း၏ မှန်ဘီဒိုကြီးထည့်တွင် အပြည့်ရှိသောမုန်းများကို မည်သူ့မျက်နှာကိုမှ ထောက် ထားစရာမလိုပါပဲ မစားပဲသည်းခံနိုင်သော ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကဲ့သို့ သင်သည်းခံဖူးပါသလား။ သင်သည် မစားပဲသည်းခံဖူးသည်ဟု ဖြေဆိုလျှင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်မစားပဲ သင့်သားသမီးများအတွက် သည်းခံပြီး ချန်ထား ခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သည်းမခံနိုင်သော အရာကို သည်းခံမှသာလျှင် ပါရမီမြောက် သည်းခံခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ငါတို့…မည်သည့် အတိုင်းအတာထိ သည်းခံခဲ့ဖူးကြသနည်း။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 11:53 PM0comments Links to this post
ပေါက်ကရတော့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ၊
ငါ ခြေသလုံး အိမ်တိုင်ထူထားတယ်၊
ငါ. ကမ္ဘာကြီးမှာ နေပါတယ်၊
စာရေးချင်ရင် ရွာဦးကျောင်းသို့ လိပ်မူလိုက်၊
ငါ. သဘာဝတရားတွေကို လေ့လာဖတ်ရှု့နေတယ်၊
ဆွေးလိုက် တွေးလိုက် ငေးလိုက်၊
အနုပညာ တစ်ရပ်လို့ ခံစားတတ်ခဲ့ရင်၊
ညာနေတာတွေကို မှန်တယ်လို့ လက်ခံနိုင်အောင်၊
ဟာနေတာတွေဟာ ကဲ့ရဲ့ဖို့သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး၊
Posted by ကပ္ပိယကျော်ခေါင် at 7:26 PM0comments Links to this post
သူမ၏ ငယ်မည်မှာ‘‘ ဖရာသေး‘‘ ဖြစ်သည်။ ဖရာသေး ဟူသည် ‘‘နတ်သမီးလေး‘‘ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ငယ်စဉ်က အလွန်ဆော့လွန်း သောကြောင့် ချစ်စနိုးလေးဖြင့် ‘‘ဟာရီကိန်း‘‘ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသေးသည်။ သို့သော် ယခုအခါတွင်း‘‘ ပညာရှိ မင်းသမီးလေး‘‘ဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ သူသည်ကား အခြားသူ မဟုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝ ခံယူရရှိထားသည့် ‘‘မဟာချက်ကရီသီရီဒုံ‘‘ ပင် ဖြစ်သည်။
မင်းသမီးသီရီဒုံသည် ထိုင်းဘုရင်းမင်းမြတ် ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်) နှင့် မိဖုရားကြီး သီရီခေတ် တို့၏၊ တတိယမြောက် သမီးတော် ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၅၅-ခုနစ်၊ ဧပြီလ ၂-ရက်နေ့တွင်၊ ဘုရင့်နန်းတော်၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈-ခုနစ်တွင် ချီထရာလာဒါကျောင်း၌ စတင်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၂-ခုနစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ဝိဇ္ဇာဘာသာ ရပ်ဖြင့် အောင်မြင်သူများအနက် ပထမကိုရရှိခဲ့လေသည်။ ၁၉၇၃-ခနစ်မှ၊ ၁၉၇၆-ခုနစ်အထိ ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာဌာနတွင်၊ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ၊ သမိုင်းဘာသာ ဂုဏ်ထူးတန်းတွင် မထမအဆင့်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ပညာသင်နစ် လေးနစ်စလုံးတွင် အတော်ဆုံးကျောင်းသူ ဖြစ်သဖြင့်၊ ရွှေတံဆိပ်ဆု ကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ပညာထူးချွန်မူကြောင့် ပညာသင်ဆုကိုလည်း သုံးနစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သည်၊ တက္ကသိုလ် ပထမနစ် အပြီးတွင်လည်း ပြင်သစ်ဘာသာရပ်၌ ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြန်သည်။
ထိုနောက် သီရိဒုံသည်၊ ဆောလ်ပါကွန်း တက္ကသိုလ်မှ အရှေ့တိုင်း ကမ္ဗည်းကျောက်စာ ဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့်၊ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်မှ အရှေ့တိုင်းဘာသာရပ်များဖြင့် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၁-ခုနစ်မှစ၍ စရီနာခရာရင် ဝီရက်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာရေးဖွဲ့ဖြိုးမှူ ဘာသာရပ်များကို ဆက်လက် လေ့လာခဲ့ပြန်သည်။ မဟီဒိုးတက္ကသိုလ်၊ ကာဆက်ဆတ်တက္ကသိုလ်၊ ဘရင်မွန်ကယ်စက်မှူတက္ကသိုလ်၊ သမ္မာဆတ်တက္ကသိုလ်၊ ရမ်ခမ်ဂဟန်းတက္ကသိုလ်၊ ပက်ပါဒိုးတက္ကသိုလ်၊ ဆုကာထုံးသာမတ်သီရတ်တက္ကသိုလ် နှင့် ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်တို့က၊ သမီးတော် သီရီဒုံးအား ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့(၁၁)ခုကို ချီးမြှင့် ခဲ့သည်။ သီရီဒုံမင်းသမီးသည် သပ္ပံစာပေ ရာဇဝင်သမိုင်း ပန်းချီအနုပညာနှင့် ဂီတတို့တွင် ဝါသနာထုံ၍ လေ့လာ လိုက်စားသည်။ မင်းသမီးသီရီဒုံသည်‘‘ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်းစီ‘‘နှင့်‘‘ယိုဒယား ဗိသုကာ အသင်း‘‘တို့တွင် ဂုဏ် ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
သမီးတော်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဆွီဒင်၊ အစ္စရေး၊ အီရန်၊ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ တရုတ်၊ သြစတြေးလျ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံများသို့ အနှံအပြားသွားရောက် လည်ပတ်ဖူးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၈၆-ခု မတ်လ ၂၁-ရက်မှ ၃၁-ရက်နေ့အထိ လာရောက်လည်ပတ်ဖူးလေသည်။ သီရိဒုံသည် ထိုင်း ကိုးရီးယားနှိင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံတို့မှ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးဆောင် ကိုးခုကိုရရှိခဲ့သည်။
သမီးတော် မဟာချက်ကရီသီရိဒုံသည် ထိုင်းကြက်ခြေနီအသင်း အမှူဆောင်အဖွဲ့၌ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆိုင်ဂျိုင်း ထိုင်းဖောင်းဒေးရှင်း၌ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယမြှောက်ရာမဘုရင်း အထိမ်းအမှတ်ဖောင်းဒေးရှင်း၌ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြဘုရား ကျောင်းတော်နှင့် မဟာနန်းတော်မွန်းမံထိန်းသိမ်းရေး ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ချူလာလောင်ကွန် ဘုရင့် စက်မှူ တက္ကသိုလ် ဥပဒေ နှင့် လူမှူရေးသိပ္ပံဌာန ကထိကလည်းဖြစ်လေသည်။ သီရိဒုံသည် ထိုင်းဘုရင့် ကြည်း တပ်မ တော်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနှင့်၊ ထိုင်းဘုရင့် လေတပ်နှင့် ရေတပ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးလည်းဖြစ်လေသည်။
မင်းသမီးသီရိဒုံသည် အားလပ်ချိန်များတွင် သုတေသနနှင့် ကျောင်းတွင်းဖွဲ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ သီးချင်းဆိုခြင်း၊ ထိုင်းတူရိယာတီးမှူတ်ခြင်း၊ စာပေရေးသားခြင်း၊ ကဗျာစပ်ဆိုခြင်း၊ ပန်းချီရေးဆွဲခြင်းနှင့်၊ ပန်းပုထုခြင်းတို့ကို ပြု လုပ်လေ့ရှိသည်။
မင်းသမီး ဖရာသေး ခေါ် မဟာချက်ကရီသီရိဒုံသည် ယခုအခါတွင် သက်တော် ၅၄- နစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုင်းပြည်သူပြည်သားတို့၏ မေတ္တာကို အထူးတလေရရှိကာ ဘုရင့်သားတော် သမီးတော်များထည့်တွင် လူချစ်လူခင်အပေါဆုံး မင်းသမီးတစ်ပါး အဖြစ်ဖြင့် ထင်ပေါကျော်ကြားလျှက်ရှိပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 12:49 PM0comments Links to this post
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 7:51 AM0comments Links to this post
အလိုတော်ပြည့်ဘုရားနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက် (၁၃၇၁-ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း ၁၄-ရက် အကြိုအဓိဋ္ဌာန်ပွဲတွင် အလိုတော်ပြည့်ဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာ။ ဦးပညာသာရ (မိတ္ထိလာ-အလိုတော်ပြည့်)မှ ဖတ်ကြားချက်အား မူရင်းအတိုင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
သဒ္ဓါကြည်လင် ပါရမီရှင် သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ… (၁၈) ကြိမ်မြောက် အလိုတော်ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယဘုရားပွဲတော်သို့ ရောက်ရှိလာကြကုန်သော ပါရမီရှင် သဒ္ဓါရှင်အပေါင်းတို့အား ကျွန်တော်တို့ ဂေါပကအဖွဲ့မှ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခရီးဦးကြိုဆို၍ ဂါရ၀ပြုပါကြောင်း ဤအလိုတော်ပြည့်စေတီတော်မြတ်တည်ရှိသည့် နေရာသည် ကျန်စစ်သား မင်းတရားကြီး၏ အောင်မြေအစစ်ဖြစ်ပြီး အဓိဋ္ဌာန် (၃) ချက်ပြည့် မြေနေရာနှင့် ကျန်စစ်သား မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည့် အလိုတော်ပြည့်ဘုရားစေတီဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားဖြင့် တွေ့ရှိရပါသည်။ အေဒီ ၁၁-ရာစု၌ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော ကျန်စစ်သားမင်းကြီး ကောင်းမှုဖြစ်သည့် အလိုတော်ပြည့်စေတီဘုရားကို ပြန်လည်ပြုပြင်သည့် အင်းဝခေတ်မှ သင်ကြီး ငတုတ်သင် ပြုပြင်ခဲ့ပြီး မိုးဒဏ် လေဒဏ် ဥတုဒဏ်ကြောင့် နောက်ပိုင်း တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်၍ နေခဲ့သော ယခုဖူးတွေ့နေရသော ဤစေတီတော်မြတ်သည် ရှေးမူလက်ရာမပျက်ဘဲ ဖူးတွေ့နေရခြင်းမှာ အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရား၏ ပြန်လည်ပြုပြင်စီမံပြီး ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းကြောင့် ပြည်သူအများ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် လာရောက် ဖူးမျှော်ခွင့်ရရှိပြီး ကုသိုလ်မင်္ဂလာတိုးပွားခြင်းတို့ တွေ့ရှိရပါသည်။
အလိုတော်ပြည့်စေတီတော်မြတ်၏ မွန်ဘာသာဖြင့် အလိုတော်ပြည့်အဓိပ္ပာယ်ရသော ဤဘုရားစေတီတော်မြတ်ကို သစ်သီး၊ ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်းတို့ဖြင့် ဆရာတော်၏ စီမံညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စနစ်တကျ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခဲ့ကြသူများ ဂေါပကမှတ်တမ်းအရ ရာချီပြီး အလိုပြည့်ကြပါသဖြင့် ဘုရားကို ကျေးဇူးဆပ်သောအနေအားဖြင့် ပြန်လည်လှူဒါန်းခြင်း နောက်ထပ်လာပြီး ဆုတောင်းခြင်းစသည်များကို ဆုတောင်းပြည့်သည့် ကာယကံရှင်များ ပြန်လည်ပြောကြားသဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရှိပါသည်။
မိမိစိတ်သဘောအတိုင်း ဆုတောင်းပြီး အလိုဆန္ဒပြည့်ဝသူများလည်း မြောက်မြားစွာ တွေ့ရှိနေရပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံခြားပါမကျန် နတ်တော်လပြည့်နေ့ ရောက်ရှိတိုင်း မိမိတို့၏ အိမ်၌ ကိုးကွယ်ထားသော အလိုတော်ပြည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ထံမှ ဆွမ်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်း၊ ပန်း၊ သစ်သီးတို့ဖြင့် လှူဒါန်းဆုတောင်း၍ အလိုပြည့်ကြသူများ များပြားလှသည်ကို ပြန်ပြော၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်သဒ္ဓါ ပွားများစွာဖြင့် တကယ်တမ်း ယုံကြည်မှုအားကိုးပြီး တိကျမှန်ကန်သော ဆုတောင်းခြင်းစနစ်ဖြင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထု ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လှူဒါန်းပြီး ဆုတောင်းပါက တကယ်ပြည့်စုံသည့် အကြောင်းကို အများပြည်သူ ဆုတောင်းပြည့်သောပုဂ္ဂိုလ်များက သက်သေပြနေပါသည်။
ရောက်ရှိလာကြကုန်သော သဒ္ဓါကြည်လင် ပါရမီရှင် အပေါင်းတို့ အချို့အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက်ဖြင့် ဆုတောင်းပြီး ပြည့်စုံသွားသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မနည်းလှပါဘူး။ တစ်ချို့ကလည်း လုံးဝမယုံကြည်ဘဲ အမနာပ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ သရော်သလို ပြောင်သလို ပြောဆိုနေကြတာကို တစ်စွန်းတစ်စ ကြားရပါတယ်။ ဒါဟာ မနာလိုတဲ့စိတ် မကြိုက်တဲ့စိတ်ထားဖြင့် အပြစ်ပြောတာ ရောက်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကိုလည်း ကဲ့ရဲ့အပြစ်ပြောတာ ရောက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ရှေးပဝေသဏီကစပြီး ဆုတောင်းဆုယူဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သြကာသကန်တော့ခန်း၌ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ရရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းခြင်းသည် မမြင်ရ မသိရ မရောက်ရသေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို အနုမာနနည်းအားဖြင့် မှန်းဆ၍ ရောက်လိုသော ဆန္ဒ စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့် ဆုတောင်းကြတယ်၊ ပြောကြပါတယ်၊ ဆုတောင်းသည့်အတိုင်း တကယ်အားထုတ်ရင် တကယ် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ပြည့်စုံပြီး ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ သံသရာဖြစ်စရာမလိုဘူးဆိုတာ တွေ့နေကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် တကယ်သဒ္ဓါတရားရှိပြီး ဘုရားအပေါ်၌ မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်သောအား ရှိခဲ့ပါလျှင် “သဒိသံ ပါကံ ဇနေတိ”ဆိုတဲ့အတိုင်း တူသောအကျိုးကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဘုရားက တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းပဲ ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘဲ မိမိဝတ္ထုလှူဖွယ် သဒ္ဓါတရားကသာလျှင် တူသောအကျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို ဆုတောင်းပွဲကို အားခဲပြီး ရောက်လာကြကုန်သော သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အား မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ခိုင်မြဲသော သဒ္ဓါတရားထားပြီး မိမိလှူဒါန်းသော လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ သဒ္ဓါစိတ်ဓာတ်ပွားများပြီး ဂုဏ်တော်ကိုးပါးနှင့် ပွားများဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါလျှင် မိမိနှင့်ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုခုကို ခံစားရမယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ကို လက်ခံထားပြီး အားထုတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းယင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
အလိုတော်ပြည့် http://alodawpyei.org/18cele.php သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 4:17 AM0comments Links to this post
ဝပ်တလုမ်ကျောင်း၌ ဆောင်းရာသီ ခြုံစောင်များဆက်ကပ် လှူဒါန်း၊
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ဝပ်တလုမ်ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူရင်း တက္ကသိုလ်အသီးသီးတို့၌ ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာရဟန်းတော် ၅၀ ကျော်တို့အား၊ ကိုထွန်းလင်း ဦင်္းဆောင်သော စေတနာရှင် မြန်မာအလုပ်သမားများမှ ဆောင်းရာသီသုံး ခြုံစောင်းများနှင့် အလှူတော်ငွေ ဘတ် ၂၁၀၀ တိတိတို့ကို ဘဏ္ဍာတော်ငွေအဖြစ် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး။ နေ့ဆွမ်းအတွက် ကိုထွန်းလင်း နှင့် မမလေး တို့မှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြောင်း သိရှိရသဖြင့် စေတနာရှင်များ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 11:54 PM0comments Links to this post
ဘုရင့်မွေးနေ့၌ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူ
၅-၁၂-၂၀၀၉၊ နေ့၊ နံနှက် ၁၀း၀၀ အချိန်တွင်၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ဖိကဆင်လမ်း ၁၂၂- မြန်မာစက်ရုံ အလုပ်သမားများ စုပေါင်း၍၊ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲကြီးကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်လှူဒါန်းကြရာ၊ ၄င်းလှူဒါန်းပွဲအခန်းအနားသို့ ဝပ်တလုမ်ကျောင်းဆရာတော် ဖရမဟာဘုန်းထိန်ဇုတိနြေ္ဒာ ဦးဆောင်း၍၊ ပင့်သံဃာ မြန်မာရဟန်းတော်များ ၆၀ ပါးခန့်ကြွရောက်ချီးမြင့်ကြောင်း၊ ကြားသိရပါသည်။ ၄င်းစက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှ မြန်မာအလုပ်သမား ၅၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်းနှင့်၊ ဝပ်တလုမ်ကျောင်းတွင် သီးတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူရင်း၊ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတို့၌ ပညာသင်ယူနေကြသော မြန်မာရဟန်းတော်များအား၊ အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သံဃာသုံးပါးကို အလှည့်ကျ ပညာဒါနအဖြစ် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းလျှက်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 3:58 AM0comments Links to this post
ပြည်သူချစ်သော ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)၏ ၈၂-နစ်ပြည့် မွေးနေ့။
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘုမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၇၈၂ ခုနစ်မှ စတင်၍စိုးစံလာသော ချက်ကရီမင်းဆက်အနွယ်တော်မှ ဆင်းသက်လာခဲ့သော နဝမမြောက် ရာမဘုရင် ဖြစ်သည်။
ဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် ဆောင်းကုလားမင်းသား မဟီဒိုး (Prince Mahidol of Sonkhla) နှင့် မင်းသမီး ဆိုင်းဝန် မဟီဒိုး (Mon Sangwalya Mahidol) တို့၏ သားထွေးဖြစ်သည်။ ၁၉၂၇ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ကိန်းဗရစ်မြို့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူ၏ အစ်မတော်မှာ မင်းသမီး ဂါလာယာနီဗာဓာန (H.R.H. Princess Galayani Vadhana) နှင့် နောင်တော်မှာ အဋ္ဌမမြောက် ရာမဘုရင်ဘွဲ့ခံ အနန္ဒမဟီဒိုး (H.M.King Ananda Mahidol Rama VIII) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ မင်းသားအား ဖွားသန့်စင်စဉ်က ဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)၏ ခမည်းတော် ဆောင်းကုလား မင်းသားသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ လော့ဆိန်းမြို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ နောင်တော်ဘုရင် အနန္ဒမဟီဒိုး ရုတ်တရက်နတ်ရွာစံသောအခါ ဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် နောင်တော်၏အရိုက်အရာကို ၁၉၄၆ ခု၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ဆက်ခံတော်မူ၍ ယနေ့တိုင် ထိုင်းနိုင်ငံထီးနန်း၌ စိုးစံလျှက်ရှိသည်။
ဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် (၁၉၅၀ ပြည့်နစ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်) ထိုင်းမင်းသားကြီး ချန်ဒရာမူရီဆူနတ်၏ သမီးတော်ဖြစ်သူ သီရိခေတ် (Mon Rajawongse Sirikit Kiktiyakara) မင်းသမီးနှင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။ သီရိခေတ်ကို ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ်ကပင် တွေ့မြင်ရင်းနှီးမေတ္တာမျှခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သီရီခေတ်သည် နုပျိုစဉ်အခါက ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင် အချောအလှဆုံး အမျိုးသမီးများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်အဖြစ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ စုလျှားရစ်ပတ်ပြီး နောက် ထိုနစ် မေလ ၅ ရက်နေ့၌ပင် ရာဇာဘိသေက အခန်းအနားကို ကြီးကျယ်စွာဆင်ယင် ကျင်းပပြီးဘိသိက်ခံခဲ့သည်။ ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် ရွှေနန်းပြာသာဒ်တွင် အငြိမ့်သား ဇိမ်ခံ၍ နေနိုင်သူဖြစ်သည်။ ပုံပြင်ဆန်သော နန်းပြသာဒ်များကို သူ ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော် ဘုရင်းတစ်ပါးပင်ဖြစ်သော်ငြား ပြည်သူအကြားသို့ဝင်၍ ပြည့်သူ့ဝန်ကို ထမ်းရွက်နေသူဖြစ်သည်။
ယနေ့ထိုင်းနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်တွင် ထွန်းသစ်စ စက်မှူနိုင်ငံဘဝသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့ပင်ဖြစ်သော်ငြားလည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းသည်သာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားရေးကျောရိုးဖြစ်သည်ဟု ဘူမိဘောက လက်ခံထားသည်။ ကျေးလက်တောရွာများနှင့် တောင်ပေါ်ဒေသများ နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဆင်းရဲမွေးတေမှူနှင့် လူမှူပြဿနာရှိနေသမျှ တိုင်းပြည် မတည်ငြိမ်နိုင်ကြောင်း ဘုရင်ဘူမိဘော ကောင်းကောင်း သိသည်။
ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် သူ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဘူမိဘောဘုရင်က (ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေးဝါး) ဟုတင်စားခဲ့သည်။ ‘‘ ပြည့်သူ့အတွက် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်‘‘ ဆိုသည်မှာလည်း ဘုရင်ဘူမိဘော၏ လက်တွေ့  ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသည့် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ကလို ပြည်သူ့အကျိုးကို နေ့မအား ညမနား ဆောက်ရွက် ပေးလျက်ရှိသောကြောင့် ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အထိန်းအမှတ်အဖြစ်ဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဘုရင်ဘူမိဘော၏ နန်းသက်မှာ နစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘူမိဘောနန်းသက်တစ်လျှောက်၌ ကမောက်ကမ ဖြစ်မှူများ အတောမသတ်နိုင်အောင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ဘုရင်ဘူမိဘောသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ကန့်သတ်ခံထားရသော စည်းမျဉ်းခံဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူကား ပြည့်သူချစ်သောဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ပြည်သူကိုအလုပ်အကြွေးပြုသော မင်းတစ်ပါးသာ ဖြစ်သည်။ သူ၏ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးစွမ်းပကားကား ကြီးမားလှသည်။ သူ၏တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများသည် ထိရောက်အောင်မြင်သောလုပ်ဆောင်မှူများဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်း အစိုးရတွေ တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ သာ ဖြုတ်ချခဲ့သည် ဘုရင်ဘူုမိဘောကိုမူ သစ္စာရှိကြသည်။ အာဏာရယူရေးကိစ္စများတွင် ဘုရင်ဘူမိဘောသည် မည့်သူ့ဖက်မျှမပါဝင်ပဲ သိက္ခာသမာဓိနှင့်နေခဲ့သည်။ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ တရားနည်းလမ်းကျစွာ အဆုံး အဖြတ်ပေးသည်။
ဘူမိဘောသည် ထိုင်းဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သော်လည်း သူ၏နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေဆီအပြည့်အဝ ပေါ်ထွန်း ရေးကို ဦးတည်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ လိုလားနစ်သက်သူဖြစ်သည်။ ထိုင်း ဘုရင်ဘူမိဘော၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အာဏာသည် သူ၏ နန်းသက်တစ်လျှောက်တွင် ကြာလေခိုင်မြဲလေ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည် နန်းသက်အရှည်ကြာဆုံး မင်းတစ်ပါးအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူခဲ့လေပြီ။ ဘုရင်ဘူမိဘောသည် မရည်ရွယ်ပဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်ဆိုသလို နောင်တော် အနန္ဒမဟီဒိုးမှာ သူ၏ အိပ်ခန်းဆောင်၌ သေနပ်ဒါဏ်ရာဖြင့် ထူးဆန်းစွာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရပြီးနောက် နောင်တော်၏ ထီးနန်းအရိုက်အရာကို ညီတော်ဖြစ်သောဘူမိဘောက ၁၉၄၆ ခုတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ နောင်တော်နတ်ရွာစံစဉ်က ဘုရင်ဘူမိဘောမှာ ၁၈ နစ်သာရှိသေးကာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌ ပညာသင်ကြားနေချိန်ဖြစ်သည်။
ဘူမိဘောသည် ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးနောက် နဝမမြောက်ရာမဘုရင် ဘွဲ့ကိုသာမက မဟာရာဇာ ဘွဲ့ကိုပါ ပြည်သူ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီခံယူခဲ့သည်။ ဘူမိဘောသည် ၁၇၈၂ ခုနစ်ကပင် စတင်ခဲ့သော ချက်ကရီမင်းဆက် အနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ ဘုမိဘော၏ ဘိုးတော်မှာ မောင်းကွတ်ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရင်ကြီး အကြောင်းကို မှီငြမ်းရေးဖွဲ့ထားသော ကမ္ဘာကျော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးသည်၊ အင်နာခင် နှင့် ယိုဒယား (ထိုင်း) ဘုရင် (Anna and the King Siam) ဖြစ်သည်။ ထိုဝတ္ထုကို နောင်အချိန်တွင် ကမ္ဘာကျော် ခေါင်းတုံးမင်းသား ယူလ်ဘရိုင်နား နှင့် ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်သောအခါ ဘုရင် နှင့် ကျွနုပ် (The King and I) အဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့လေ၏။
ထီးနန်းကို ဆက်ခံပြီးနောက် နစ်လကြာသောအခါ ဆွစ်ဇာန်နိုင်ငံ သို့ ပြန်သွားကာ လော့ဆန်းတက္ကသိုလ် တွင် သိပ္ပံ၊ ဥပဒေ ပညာ နှင့် နိုင်ငံရေးပညာရပ်များကို ဆက်လက်သင်ယူခဲ့လေသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ဘွဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၅၁ ခုနစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြည်တော်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှအစပြု၍ ထိုင်းဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည်၊ ထိုင်းနိုင်ငံထီးနန်း၌ သက်တမ်းအကြားဆုံး ချက်ကရီမင်းဆက် နဝမမြောက် ရာမဘုရင်အဖြစ်ဖြင့် ယနေ့ တိုင် ဆက်လက်စိုးစံအုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်မှာ သက်တော် ၈၂ နစ်မွေးနေ့သို့တိုင်ခဲ့လေပြီးဖြစ်သည်။
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်(ဒ်)သည်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော် ၈၂ နစ် မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက် အုပ်ချုပ်ပါစေသတည်း။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 5:45 AM0comments Links to this post
တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝံသပါလာလင်္ကာရ(မြင်းမူ)
တိပိဋကဓရ၊ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက၊ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝံသပါလာလင်္ကာရ သည်၊ ယနေ့ ည ၀၈း၀၀ အချိန်တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင်ရောက်ရှိနေကြသော ရဟန်းတော်များ အများဆုံးသီးတင်းသုံးရာ၊ ဘန်ကောက်မြို့ ဝပ်တလုမ်ကျောင်းတိုက်သို့ ကြွရောက်လာစဉ်၊ ပညာတော်သင်ရဟန်းတော်များမှ ဖူးမျှော်ကြည့်ညို ကန်တော့ ကြပြီး။ ဝပ်တလုမ်ကျောင်းထိုက်ကြီး၏၊ ဦးစီးပဓာနနာယက ဖြစ်တော်မူသော ဆရာတော် ဖရမဟာဘုန်းထိန်ဇုတိနြေ္ဒာ နှင့်တွေ့ ဆုံကာ၊ မဟာချိုင်မြို့ညတရားပွဲသို့ ဆက်လက်ကြွသွားတော်မူကြောင်း သတင်ရရှိပါသည်။ တိပိဋကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝံသပါလာလင်္ကာရသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မင်းကွန်းတိပိဋကနိကာယ ကျောင်းတိုက်တွင်နေထိုင်သီးတင်းသုံးကာ၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့၊ လှည့်လည်ကာ တရားဒေသနာတော်များ ဟောကြားတော်မူနေပြီး၊ မိမိမွေးဖွားရာဇာတိဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ ခွက်ခွင်းကျေးရွာတွင်၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း နှင့် တိပိဋကဇီဝိတဒါန တိုက်နယ် ဆေးရုံတို့ကို ဆောက်လုပ်ကာ၊ ပရဟိတများကိုလည်း စွမ်းစွမ်းတမံ၊ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ကြားသိရပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 4:47 AM0comments Links to this post
အခုတစ်လော ရွာဦးကျောင်းသို့ ရောက်လာသူမှန်သမျှ ကပ္ပိယကျော်ခေါင် မှ အစပြုကာ လူတိုင်းလူတိုင်း၏ စကားဝိုင်းကို သတိထားမိသလောက် ပြန်ပြောပြရရင်၊ လာမည့် ၂၀၁၂- ခုနစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာကြီးပျက်မည်ဟူသော စကားကို မကြားချင်အဆုံး ကြားနေရလေသည်၊ ဤစကားသည် အဘယ်မျှမှန်ကန်မှူ ရှိသည်မရှိသည်ကို သိချင်စိတ်နှင့် လေ့လာမိသောအခါ တကယ်ပင်ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးချိန်နီးနေပြီဟု ကောက်ချက်ချမိလေတော့၏။ သို့သော် ကပ္ပိယကျော်ခေါင်တို့ ပြောဆို နေသလို ၂၀၁၂- ခု မှာတော့လုံးဝ ဤကမ္ဘာကြီးမပျက်စီးနိုင်သေးကြောင်းကို ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် တာဝန်ယူသည်ဟု မုချ ပြောဆိုနိုင်လေသည်။ အကြောင်းမှာကား=ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာပေါ်တွင် အရိမိတ္တေယျဘုရားပွင့်တော်မမူသေး၊ ဘုရားလေးဆူသာပွင့်သေးသည်၊ ဘုရားငါးဆူပွင့်တော်မူရန် ဧကန်မုချ ဗျာဒိတ်တော် ရရှိထား သောကြောင့်ဟူ၍ ဘာသာရေးရှူထောင့်က ပြောဆိုနိင်သောကြောင့်တည်း။ နောက်တနည်းမှာ ဤကမ္ဘာပျက်သတင်းကို NASA အဖွဲ့မှ တရားဝင် ထုပ်ပြန် ထားခြင်းလည်းမရှိသေးခြင်း၊ လွန်ခဲ့ပြီးသော နိုဝင်ဘာလကမှ ကမ္ဘာအနီးကို အလွန်နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားခဲ့သော ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို ကမ္ဘာသို့ အနီးကပ်ဆုံးမရောက်ခင် ၁၅- နာရီအလိုလောက်မှ သိလိုက်ရခြင်း တို့ကို ထောက်ဆ၍ ဤကမ္ဘာပျက်မည့်အရေးကို လွန်ခဲ့သော ၂၆- နှစ်ခန့် (၁၉၈၃) ခုနစ်ကတည်းက NASA က သိထားနှင့်ပြီး ထိုင်ချန်ထားခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းမှာလည်းလုံးဝ ဖြစ်နိုင်ခြေမ ရှိခြင်း၊ စသည် အကြောင်းတရာများကြောင့် လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်းကို ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် အတိအလင်း ပြောဆို နိုင်လေ သည်။ ပျက်စီးချိန်နီးပြီး ဟုသော စကား ကို အဘယ် ကြောင့်ပြောဆိုနိုင်သနည်းဟုသော်ကား၊ ယခုကဲ့သို့ကောလာဟလ ဖြစ်ထွန်းနေရခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှု့ထောင့်မှကြည့်လျှင် ကမ္ဘာပျက် မည့်နိမိတ် လက္ခဏာဟုဆိုအပ်သော ကပ္ပကောလာဟလ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာကြီးဧကန်မု ချပျက်တော့မည် ဆိုလျှင် နစ်ပေါင်းတစ်သိန်းအလိုလောက်ကစ၍ ယခုကဲ့သို့ ကောလာဟလများ ပေါ်ထွက်တတ်ကြောင်းကို
ဗုဒ္ဓစာပေများတွင်လေ့လာမှတ်သားဖူး၏။ အခုတလော ရပ်ထဲရွာထဲတို့၌ ပြသလျှက်ရှိသော ဒါရိုက်တာ ရိုလန်အီမာရစ်ခ်ျ ရိုက်ကူးထားသော Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ်ရှင်ကားတို့မှာ နောင်နစ်ပေါင်း တစ်သိန်းလွန်သောအခါ ဤကမ္ဘာကြီးပျက်စီးတော့မည့် အရိုက်အယောင် နိမိတ်လက္ခဏာများသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်၊ တနည်းဆိုရသော် ကပ္ပကောလာဟလ ကမ္ဘာပျက်မည့် နိမိတ်လက္ခဏာ များသာဖြစ်သေးကြောင်းဟု၍ မှတ်ချက်ချရမည်ဖြစ်၏။ သိပ္ပံပညာရှင်များက လောကတွင် မဖြစ်နိုင်တာ မရှိ မဖြစ်သေးသည်သာရှိ၏ ဟူ၍ ပြောဆိုကြလေ၏၊ ထိုစကားကို ရွာဦင်္းကျောင်းဆရာတော်က ဤသို့ ပြန်၍ ပြောဆိုလိုပေသည်၊ ဖြစ်ပြီးသောအရာမှန်သမျှတို့သည်လည်း မပျက်စီးနိုင်တာမရှိ မပျက်သေးသည်သာ ရှိ၏ ဟူ၍ဖြစ်လေ၏။ ဤသည်မှာလည်း အရမ်းကာရော ပြောကြားခြင်းမဟုတ်ပေ၊ ဗုဒ္ဓဘုရား ဟောတော် မူခဲ့ သော အနိစ္စာ ဝတ သင်္ခါရာ- ဟူသော စကားကိုထောက်၍ ပြောဆိုခြင်းသာလျှင်ဖြစ်လေ၏။ သို့သော် ကမ္ဘာပျက် မည့်အရေးကိုတွေး၍ ကြောက်နေလျှင် တက်တီးတိုးငှက်ငယ်သည် ကောင်ကင်ကြီးပြိုကျပျက်စီးမည်ကို စိုး၍ အလွန်သေးငယ်သော မိမိ၏ ခြေထောက်ငယ်လေးကို မိုးပေါ်သို့ထောင်၍ အိပ်သကဲ့သို့ ရှိလိမ့်မည်တကား။ အကယ်၍ ဤကမ္ဘာကြီး တကယ်ပျက်တော့မည်ဆိုလျှင်သော်မှ အနည်းဆုံး နစ်ပေါင်း တစ်သိန်းအထက် နေရအုံး မည်ဖြစ်ကြောင်း ရွာဦးကျောင်း ပရိဿတ်အား တင်ပြအပ်ပါသည်။ သို့သော် =ဤကမ္ဘာကြီးတကယ် မပျက်သေးပါ။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 5:55 AM0comments Links to this post
ကျေးဇူးတော်အရှင် ဖြုးဆရာတော် ၏ အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပန အခမ်းအနား- ဓါတ်ပုံများ
ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ရသကဲ့သို့ ကုသိုလ်ပွားများစေရန် ရည်ရွယ်မျှဝေပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 5:41 PM0comments Links to this post
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 8:02 PM0comments Links to this post
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 1:34 PM0comments Links to this post
နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးအလှူတော်ငွေဆက်ကပ်လှူဒါန်း
ဘန်ကောက်မြို့ ဖလန်ကောက် ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူလျှက်ရှိသော နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအတွက်၊ စာတုပတီ မြန်မာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ ၊ ဖိကစင် ၆၂/၁ မိသားစုများအဖွဲ့ နှင့် စေတနာရှင် မြန်မာအလုပ်သမားများစုပေါင်း၍ ၊ ဆေးအလှူတော်ငွေ လှူဒါန်းပွဲအခန်းအနားကို ဘန်ကောက်မြို့ ဝပ်တလုမ်ကျောင်းတိုက်၌ ပြုလုပ်လှူဒါန်းကျင်းပရာ၊ ဖြူးဆရာတော်၏ တပည့်များဖြစ်ကြသော အရှင်အာလောက နှင့် အရှင်ဇာဂရ တို့မှ လက်ခံရယု၍ လှူဒါန်းမှူအစုစုတို့ အတွက် ရေစက်သွန်ချ အမျှပေးဝေကြကြောင်းကို သိရှိရပါသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါရန် စေတနာရှင်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 8:46 PM0comments Links to this post
အလိုတော်ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် .1.12.2009 ရက်နေ. နံနက် 7း00 နာရီ.မှ (9း00)နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရပ်ဝေးရပ်နီးရှိတပည့်ဒကာဒကာမများအား အသိပေးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
for more information to visit / www.alodawpyi.multiply.com
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 10:09 PM0comments Links to this post
သို့ပါသောကြောင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီ၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့ ကို ကြည်ညိုကြသော တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများအနေဖြင့် ဘေသဇ္ဇဒါန ကျန်းမာရေးဆေးအလှူတော်အတွက် စွမ်းနိုင်သမျှ ကုသိုလ်တော် ပါဝင်လိုကြပါလျှင် အောက်ပါဖုံးနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်
း ကုသိုလ်အကျိုးမျှော်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ဘလောဂါ ဝိမုတ္တိသုခ ၏ မေတ္တာရပ်ခံခြင်းအား ကူညီသောအားဖြင့်၎င်း၊ အလွန်တရာမှ ကြည့်ညိုလေးစားရသော ဖြူးဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်းမာရေး အတွက်၎င်း ဤသတင်းအား ဝိမုတ္တိသုခ၏ မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 5:16 AM0comments Links to this post
ကပ္ပိယကျော်ခေါင်း နှင့် တစ်ကြော့ပြန် ဘိုးမှန်
အခု တလော ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်၏ အလွန်တရာအားကိုး အားထားရသော တပည့်ကျော် ကပ္ပိယကျော်ခေါင် တစ်ယောက် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်နေရခြင်းမှာကား တစ်ကြော့ပြန်ဘိုးမှန် ဆိုသူ၏ ပယောက မကင်းလှပေ၊ ၄င်း တစ်ကြော့ပြန်ဘိုးမှန် ဆိုသူသည် နာမည်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် စကားကို ထပ်ခါတလေ့လေ့ ပြောဆိုလေ့ရှိ၏၊ ပြောပြီးသောစကားကို အနည်းဆုံး တစ်ကြော့ပြန်၍ မပြောရလျှင် စာဝင်အိပ်ပျော်ရှိလှသူမဟုတ်ပေ။
စကားပြောလျှင်လည်း ” ခုနားက ပြောခဲ့သလို ” ဟူ၍ နိဒါန်းချီကာ ပြောဆိုတတ်လေ၏၊ သူပြောသော စကားများတွင် ဂျပန်ခေတ် မြန်မာပြည်အကြောင်းမပါလျှင် မပြီး၊ တစ်ခုခုကို နှိုင်းယှဉ်၍ ပြောရာတွင် လည်း ” ငါ ဂျပန်ခေတ်က လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပေါ့” ” ဂျပန်ခေတ်က ငါ့ အဖိုးကိုင်ခဲ့တဲ့ ဓားမျိုးပေါ့” ” ဇာဇီပြင်ကုန်းမှာ ဂျပန်စစ်သားတစ်ယောက်က်ို ငါတို့အဖွဲ့လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခဲ့တုန်းကပေါ့” စသည်စသည်ဖြင့် အာဘောင်အားရင်း သံသံ ပြောဆိုလေ့ရှိ၏။
အခုလည်းကြည့်.. မြို့မှာ ငါးထောင်တန်း ထွက်တယ်ဆိုလား ဘာဆိုလား ကြားတာနဲ့ ၊ ဂျပန်ခေတ်ကို ရောက်သွားပြန်ရော့၊ ” အံမယ်..ငါတို့ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ဆိုရင် လက်ထည့်မှာ ငွေ ၁၀ လောက်ရှိရင် မြို့ကိုသွား ပုဆိုးတစ်ထည်ဝယ် အင်္ကျီးတစ်ထည်ဝယ် မုန့်အဝစား ဒါတောင် ငွေက မကုန်နိုင်သေးလို့ ၊ ဟို…ဂျပန်စကားပြန် လုပ်စားနေတဲ့ ဖိုးလုံးနဲ့အတူ ယမကာလေး ဘာလေး သောက်လိုက်သေးတယ် မင်းတို့ခေတ်ကျမှ ဘာတွေလည်းကွာ” ဟူ၍ ညဉ်းတွားနေလေတော့၏ ။ သိုသော် ကပ္ပိယကျော်ခေါင် နှင့် ရွာသားလူငယ်တစ်စုတို့သည်လည်း တစ်ကြော့ပြန်ဘိုးမှန်၏ စကားကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ပြန်လည် ချေပနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြပေ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ့် အလွန်ဗဟုသုတ ရှိသူဟု ယူဆထားသော ကပ္ပိယကျော်ခေါင်သည်ပင်လျှင် ဘာမျှ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပေ။ အကြောင်းမှာကား… ဂျပန်ခေတ်က သုံးခဲ့သည်ဆိုသော ငွေစက္ကူကို၎င်း၊ ယ္ခုထွက်နေသည်ဆိုသော ငွေစက္ကူကို၎င်း ကပ္ပိယကျော်ခေါင် နှင့်တကွ ရွာသူရွာသားများ အားလုံး မည်သူမျှ မြင်ဖူးခဲ့ခြင်းမရှိသေး သောကြောင့်တည်း။ ။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 9:47 AM0comments Links to this post
နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကျန်းမာ...